I-divergent, idrama yokwahluka kuluntu olungamxoleliyo. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, iintlobo, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Ukwahlukana libali lolutsha elibhalwe nguVeronica Roth, umbhali ongu-1 othengisa kakhulu ngokwe ENew York Times. Iyelenqe layo lijolise kwinto ekuzifumanise ukuba abantu bahlala phi, ukwazi ukuba zeziphi iitalente zethu, inkqubo ephantse iqale ngexesha leengxaki zokufikisa. Le noveli inethamsanqa kwixesha elizayo, ibekwe kwisixeko saseChicago, yadalelwa ukuba icinge malunga nokuba iya kuba njani kwikamva lokucinga apho abantu bahlulahlulwe baba ngamaqela amahlanu: inyani, i-erudition, ubuhlobo, ukuzithemba kunye nokuzincama .
Apho siboniswa umfazi osemncinci ojamelene nesigqibo esinzima: ukukhetha ukuba yintoni ubuhle bakhe, ukuze abe kwelinye lamaqela amahlanu, nangona kunjalo, uyazi kwaye uziva ukuba angakhula ngaphezulu kwesinye. Kwindalo engafaniyo akuvumelekanga ukuba neempawu ezintle ngaphezu kwesinye, kwaye iziphumo zokuphuhlisa izipho ezininzi zinokuba mbi. Ibali eliyinyani lenziwa nguRoth ngethuba leminyaka yakhe yekholeji.
1.1 Ukuzalwa nobomi
1.3 Umbhali kwimveliso epheleleyo
1.4 Kwiintanethi zentlalo
2.1 Iyelenqe kuluntu lwedystopi
2.2 Iminyaka yokukhetha umendo wakho
2.3 Isigqibo esingalindelekanga
2.4 Akuvunyelwe ukwahluka
3 Ukwamkelwa kwihlabathi liphela
4 Tsibela kwimiboniso bhanyabhanya
5 Iincwadi zombhali
UVeronica Roth unjalo Umbhali waseMelika Uzalelwe u-Agasti 19, 1988 kwidolophu yaseChicago. Kubo bonke ubomi bakhe, nokuba ebutsheni bakhe, wayetsala uncwadi. URoth wayekunandipha ukuchitha iiyure ezininzi efunda kwaye ebhala kwiminyaka yakhe yamabanga aphakamileyo. Abazali bakhe bahlala beyibona italente yakhe, bemqhubela ekubeni afunde.
Bayingqondi abanomdla kuncwadi, bathandi bendalo kunye nezilwanyana. Kananjalo umyili webali elimnandi elibambe izigidi. Utshatile kuNelson Fitch ukusukela ngo-2011.
Ifunyenwe ivela kuMntla-ntshona, Kwaye kwangoko emva kokuba ephefumlelwe ukuba apapashe incwadi yakhe yokuqala, awayibiza ngegama Ulwahlulo. Oku, ngaphandle kokuba kungumsebenzi wakhe wokuqala, uqhubeke waba lisango lakhe elimangalisayo lokuzukiswa njengombhali. Impumelelo yakhe iye yokuba ngo-2014 wayephakathi kwababhali abahlawulwa kakhulu.
Ababhali abahlawulwa kakhulu ngo-2014 no-2015
Le noveli yabhalwa ngelixa ndifunda ubhalo loyilo kwikholeji. kwaye umbhali omnye uqinisekisa ukuba izimvo zaphuhliswa ngelixa wayeqhuba imoto yakhe.
Umbhali kwimveliso epheleleyo
URoth ngumbhali wangoku kwaye uphuhlise umhlaba ofanayo kuwo onke amabali akhe. Ngoku uhlala eChicago kunye nomyeni wakhe kunye nenja, kwaye ungumbhali wokubhala ngokusisigxina. Emva kwempumelelo ye- Ulwahlulo, saga yaphuhliswa ukuba amaqela ezinye iincwadi ezintathu.
URoth uhlala ebhala kwaye upapashe incwadi entsha phantse minyaka le, engayekiyo ukusukela ngo-2011. Owona msebenzi wakhe wakutshanje kufanele ukuba upapashwe ngo-Okthobha 1, 2019, ngolindelo olukhulu kubalandeli bakhe.
Ubugcisa obunxulumene namaqela achazwe kwincwadi eyahlukileyo.
URoth ngumbhali wangoku, uqhekekile phakathi kweeyure ezinde zokuza namabali amnandi kunye nokuphila ubomi obuqhelekileyo. Kwimithombo yeendaba zentlalo uhlala umfumana ekwabelana ngezinto ngobomi bakhe bemihla ngemihla, kusasa uhamba nenja yakhe kunye nohambo kunye nomyeni wakhe.
Uyakuthanda ukwabelana ngeendlela zakhe zomsebenzi kwi-Instagram yakhe (@vrothbooks), indlela ocwangcisa ngayo iofisi yakho kunye nezinto ozithandayo zokuzoba simahla. Ukwabonisa ukuthanda kwakhe indalo kunye nokwenza imisebenzi yangaphandle.
Iyelenqe kuluntu lwedystopi
Eli bali lenza ilizwe lalo kuluntu lwase-dystopi apho abantu bahlulwe baba ngamaqela amahlanu kwaye nganye yazo ivelisa isidima esahlukileyo. Kukho umlinganiswa ophambili oneminyaka eli-16 ubudala, uBeatrice Phambi, ethatha isigqibo sokuba enze ntoni ngobomi bakhe, leliphi iqela lokujoyina, ukuba yinyani (ukunyaniseka), irudition (ubukrelekrele), ubuhlobo (abo banoxolo), isibindi (isibindi) okanye isiqu sakho. -Ukukhanyela (i-altruists).
Iminyaka yokukhetha umendo wakho
Xa abantu abancinci befikelela kwi-16 yeminyaka ubudala kolu luntu, lixesha lokuba ukhethe iqela oya kulo. Into eyamkelweyo ekuhlaleni kukuba uhlala kwiqela apho usapho lwakho lukhonaNgaphandle koko, iya kuba luhlobo lolwaphulo-mthetho, nangona kunjalo, wonke umntu oselula unakho ukukhetha.
Isalathiso siqala ukuba nzima xa kufika umhla wokuzalwa we-16th we-protagonist, u-Beatrice, ongazi kakuhle ukuba leliphi iqela alichongileyo. Ukungathandabuzeki kuyambamba ngokungazi ukuba ungowuphi na ubuhle, kuba unokuba ngowomntu, kwaye ekugqibeleni ugqiba ukhetha iqela elincoma wonke umntu, kuquka naye.
UVerónica Roth, umbhali weDivergent.
U-Beatriz wakhuliswa phakathi kweqela elalikhanyela usapho lwakhe, nangona kunjalo, Usuku lokulinganisa apho kufuneka akhethe iqela lakhe, uthatha isigqibo sokuya ngesibindi, kunye nesibindi. Akazi nokuba isigqibo sakhe besichanekile na kwaye yonke into iqala ukuba nzima.
Ngexesha lokufumanisa kwakhe ubuqu, umlinganiswa ophambili uzinika igama elitsha kwaye uqhubeka ukuzibiza ngokuba nguTris., Igama elihamba ngakumbi kwiqela lakhe elitsha. Ibali livela phakathi kweemeko ezigabadeleyo zoqeqesho lweqela, izoyikiso kunye nokuthandana. Yonke into yokuphela ngokuqonda ukuba yeyiphi into eyahlukileyo.
Ngexesha lenkqubo yencwadi, uTris uqala ukuqonda ukuba uneetalente kunye nokulunga okungadibani neqela lakhe kuphela, kodwa inokuba yeyabanye abathathu: ukuzincama, isibindi kunye neerudition; into engavumelekanga kuluntu lwakho. Oku kufunyanisiweyo kuyinxalenye yoloyiko ekufuneka luphile, usazi ukuba luyahluka.
Umxholo wale noveli ujongene nemiba enxulumene nokuzifumanisa ungumntu, Yazi ukuba zeziphi iitalente kunye neemfanelo onazo ebomini, yiyo loo nto inomdla kakhulu kulutsha.
Ukwamkelwa kwihlabathi liphela
Eli bali linabagxeki abalungileyo kwaye, ukongeza, lifumene ukuqondwa okubalulekileyo, njengaleyo inikwe yiNew York Times, xa ukulinganiswa Ulwahlulo njengeyona nto ithengiswa kakhulu. Kwaye ayilolize, kunye neMidlalo yeNdlala, yenye yezona zinto zintle zexesha elizayo ezibhaliweyo.
Ibhaso lokuKhethwa kweGoodreads ngo-2011 kwiNcwadi oyithandayo.
Eyona ncwadi ibalaseleyo yango-2011, ngokwePapashi yeVeki.
Ophumeleleyo kwabaLishumi abaPhezulu kuLutsha lwe-YALSA 2012.
UVeronica Roth ibinzana.
Tsibela kwimiboniso bhanyabhanya
Kunyaka nje omnye emva kokubonakala kwinoveli Ulwahlulo, I-Summit Entertainment ithenge amalungelo encwadi kwaye ngo-2012 kwaqala ukulahlwa kwinguqulelo yefilimu. Ekhokelwa nguNeil Burger, ifilimu yakhutshwa ngoMatshi 21, 2014.
Ulwahlulo. UCanzibe 2011
Umvukelo. UCanzibe 2012.
Ukunyaniseka. Okthobha 2013.
NeUkudityaniswa kwamabali amafutshane amahlanu abalisa ibali leCuatro. Julayi 2014.
Iimpawu zokufa. NgoJanuwari 2017.
Iindawo ezahlukileyo. Isilimela 2018.
Isiphelo kunye nezinye iziqalo: amabali avela kwikamva. (Iya kupapashwa ngo-Okthobha 1, 2019).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Umthengisi, uVeronica Roth uthengisa kakhulu